Zulubar Zvinoda varume pabonde 23.08.2021 23.08.2021 Comments
Pabonde chidobi. How kusvika skvirta?
Murume Wangu Anodziya Mubhedha Chikamu 1001 - 1022 Kuverenga Kwepamhepo Online
Kana chishuwo chebonde chikarasika ... zvekuita?
Varume vanoda chii pabonde?
Matipi ekuziva mumwe wako uye nekuvandudza hukama hwepedyo
Sagittarius murume: sei kunzwisisa kuti ari murudo? Sagittarius murume-pakugarisana
Tiri panguva apo pane shanduko dzakawanda uye zvinoda zvese pabonde nemagariro. Muenzaniso ndewekuti pese patinenge tiri kubvunza zvakanyanya nzira yekunzwisisa hukama hwevaviri. Ikozvino hazvina kufanana sepakutanga, asi isu zvakare tine polyamory umo munhu wega wega anonzwa akasununguka kurarama hukama hwavo pasina kuwira mukusarura kwevamwe.
Isu takajairira chokwadi chekuti hukama ndewe murume mumwe chete mune vanhu vaviri chete. Nekudaro, kana zvasvika parudo, kukosha kwekuzvida pachako kunoiswa pamberi pechirevo chekusendamira pane mumwe munhu.
Sezvinei, haugone kufara zvichienderana nekuti uripo here kana kwete nemumwe munhu. Iwe unofanirwa kuzvifarira wega pasina chaunoda. Rudo runofanirwa kuve rwunovandudza zvachose uye hune hutano chiitiko chinounza zvakanaka zvibodzwa muhupenyu hwako. Inofanirwa kupa zvimiro zvakagovaniswa sekuremekedzana nekutaurirana. Kana isu tichida kuve nemusi wakanaka kwazvo nemumwe munhu, isu tinofanirwa kuziva kuti munhu wega wega akasiyana.
Munhu wega wega anofanira kuvaka yavo yega kodhi uye awane zvatinoda uye atifadze. Kune akawanda matoyi erotic ekusimudzira kuita zvepabonde. Iwo maturusi akanaka kwazvo ekuzvidzora uye ruzivo rwega Vanotibatsira kuongorora kupfuura izvo zvatinoziva kare uye kubuda munzvimbo yedu yekunyaradza pabonde.
Kunyanya, hukama husina kusimba hunosimbiswa muhukama hwemurume mumwe chete hwakareba. Chero mhando yehukama, zvakakosha kuti uzive uye ushandise mhando dzakasiyana dze makondomu izvo zviripo. Kukosha kwemakondomu Kondomu ndiyo nzira yakanyanya kushandiswa uye yakachipa zvikuru yekudzivirira kubata pamuviri.
Kune zviuru zvemaumbirwo uye zvinonhuwira uye zvinobatsira kudzivirira kubva kuzvirwere zvepabonde pamwe nepamuviri pasingadiwe. Zvakakosha kuita bonde rakachengeteka nemunhu wese waunoda.
Kune makondomu ane flavour anounza bonde kuhupenyu. Kune akasiyana akasiyana siyana anosanganisira chokoreti, sitirobheri, mindi, uye zvakawanda. Ramba uchifunga kuti makondomu haasi evarume chete, asiwo evakadzi. Kune kondomu yemukadzi uye kunyangwe vasati vanyatso kuzivikanwa, kune vanhu vazhinji vari kutanga kutora danho. Kondomu rechikadzi ipurasitiki rakapfava rine magumo akavharwa.
Pamugumo wega wega ine rin'i kana mupendero. Mhete iri kumucheto wakavharwa uye nyini inopinzwa zvakadzama pamusoro pemuromo wechibereko kuchengetedza chubhu nguva dzose munzvimbo imwechete. Mhete iri kumucheto wakashama ndiyo inosara iri kunze kwekuvhurika kwemukadzi.
Nekudaro, kune vanhu vazhinji vane allergiki kune latex. Vanhu ava vanotambura kubva kune zvimwe zviratidzo zvichibva pakutsvuka uye mablister kumhuno inomhanya uye maziso emvura. Iwe unogona kunge uine zvinopesana neyakaitika kune latex uye hazvisi zvako zvaunofarira. Nekudaro, iwe haufanire kunetseka nezve izvi nekuti kune makondomu akagadzirwa nezvimwe zvinhu kupfuura haina latex asi polyurethane. Matoyi ebonde Matoyi anowedzera repertoire yemanzwiro ekuda kunzwa.
Uye zvakare, kuvabatanidza nemamiriro azvino, matoyi ndiwo mubatsiri akakwana ekuderedza kushushikana, anotibatsira kurara uye kunzwa tichifara uye takasununguka. Iyo endorphins yakaburitswa yakanangana nekuita kuti tinzwe takanaka mushure mebonde uye isu tinotarisira kudzokorora chiitiko ichi, kungave wega kana sevanhu vaviri Kuvakwa kwerudo Kudzokera kurudo, imwe yemazano akanakisa ekumisikidza hukama haisi yekutsvaga rudo, asi kuivaka.
Rudo runoda kushanda nesimba uye kutarisira zuva nezuva. Zvakare, isu tinogara tichitaura nezve maitirwo akanaka ehukama, asi isu tinokanganwa kutarisira rudo rwedu. Isu tinozvibvumidza isu pachedu kukanganisa, kunzwa zvakashata, kucherechedza kubudirira kwedu uye hunhu uye newemumwe wedu. Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezvehukama hwazvino uye kukosha kwekushandisa makondomu pabonde zvisina njodzi.
Izvo zviri muchinyorwa zvinoomerera pamisimboti yedu ye tsika dzekunyora. Kuti utaure chikanganiso tinya pano. Yakazara nzira kuchinyorwa: Stylish Varume » Lifestyle » Matipi ekuziva mumwe wako uye nekuvandudza hukama hwepedyo Iwe unogona kuva uchifarira.
Zvinyoro nyoro kutendeuka pamusoro pomuviri, Ji Rou ichave inorwadza kupopota. Aiita kunge aine hope, anotyisa uye aine hutsinye hope. Mukurota, murume anonzi Qin Yinze akamushungurudza, kunyange Kwete, haisi kurota. Kana kwaive kurota, kurwadziwa mumuviri wake kungadai kusiri chaiko chaiko. Jirou akavhura maziso ake ndokuona kuti paive nerima rakamukomberedza. Aisaona rima reminwe yake. Sezvingatarisirwa, iye aisakwanisa kuona chero chinhu zvakajeka. Aisaziva kuti aivepi kana kuti yaive nguvai.
Chinhu chega chaaiziva ndechekuti muviri wake wainge wakaita sewakatyoka furemu, uye kurwadziwa kwake kwaimuita kuti afambe zvinorwadza. Pamwe hakusi kurwadziwa kwepanyama chete, asi kushungurudzwa kwepfungwa kunomuita kuti apunzike.
Muhupenyu huno, Ji Rou haana kumbofunga kuti nguva yake yekutanga yakabviswa seizvi. Kurwadziwa uku hakuna kukanganikwa! Pakadzika kwazvo mumongo! Hupenyu uhu haugone kukanganikwa! Zvese zvakangoerekana zvaitika, Ji Rou akanzwa kusetsa zvakanyanya. Akaseka nekupusa kwake ega uye kwake kwekupedzisira kusekwa. Mufungo wehupenyu hwake ndewekuti hakuzove ne pie mupasi, chimvuramabwe chete chinozowira vakafa. Ini ndaisatarisira kuti mushure mekutengeswa kwemhuri yaJi, aizove akapusa zvekutenda kuti murume asinganzwisisike anomubatsira chaizvo.
Imhaka yekuti akabata naJi Chendong, nekuti akamubatsira kununura amai vake, uye akasununguka chose paari uye akatenda kuti aive murume akanaka. Zvisinei, akambofunga nezvazvo here? Pamwe ndiko kutamba kwese kwaakaita naJichendong, uye anotamba kunge clown. Ari kutaura chokwadi. Akamutumira kumusuwo uye akatukwa naye. Hazvishamise kuti iye aisaziva uye akapusa.
Ji Rou akaedza kurwisa kusvotwa kwake ndokuisa nyemwerero yakajeka: "Mr. Chokwadi, wagutsikana nemuviri wangu here? Akauya kwaari uye akaramba akabata chirebvu chake zvakanaka murima: "taura, wakandiitei? Panguva ino, aikwanisa kumubvunza nenzira yekururama.
Ji Rou akangoerekana anzwa kuti murume anonzi Qin Yinze aive nani kupfuura imbwa inopenga yaJi Chendong. Qin, urikuda kundinzwa ndichiti chii? Chii chaanoda kunzwa? Asati amuziva iye chete kunyepa nekunyepera.
Zvino, anogona kushandisa nzira dzakadaro kwaari. Aigona kumupwanya chero nguva kana achida. Haiwa mhani! Qin, usataure kuti unoita kunge washungurudzwa. Wakanga une hasha sei kare kare? Usakanganwa, ndakuita kuti upopote uye uridze mhere. Qin, urikuda kuti ndiende kupi? Usandirega ndichikuona zvakare! Qin, kana tiine zvisungo zveganda, unenge uine moyo wekundirega ndiende? Anoda kuona murume anomurwarisa. Asi haakwanise kuenda pasina mvumo yake, saka anoda mhinduro.
Chapter Zvishoma nezvishoma yakaenderana nerima rekamuri, Ji Rou aigona kuona kumeso zvakajeka. Chiso ichi chinotonhora uye chisina moyo, senge shumba inotonhora ine ropa uye unopenga. Chokwadi, chibvumirano chatakasainirana hachina maturo? Haadi kuzobatanidzwazve nemurume uyu mune ramangwana.
Ndinovimba achawedzera kutaura, kumupa mhinduro yakajeka, kumuudza kudzimwa kwechibvumirano, kuti angaenda kure zvakadii, uye asazoonekwe pamberi pake mune ramangwana. Zvakare, akasvina chirevo kubva mumeno ake, "iwe unofunga kuti ungadzore chibvumirano chawakasaina nekurara neni? Aya mazwi mana akafanana nezvipikiri zvina. Ivo vakaoma kuboora moyo waJi Rou. Zvinorwadza zvikuru. Matova pfuma yangu. Iwe uri mweya wangu paunofa. Haukwanise kundirega ndichienda.
Qin, kana ukasarara zvakakwana kamwe, ndinogona kurara newe kakati wandei kusvikira wagutsikana. Unobvumirana nazvo here? Mukadzi akasviba! Uyu mutongo, sekungovhura otomatiki loop nhepfenyuro, unoramba uchiteera munzeve dzaJirou, uchimuyeuchidza nekumuseka. Chokwadi Yinze ndizvozvo.
Panguva ino, iye akasviba chaizvo. Kubva panguva yaakamudhiraina, ane tsvina. Kubva mukati kusvika kunze, iye akasviba zvakakwana. Asi akamusvibisa. Ndeupi kodzero yake yekusamuda? Panguva imwecheteyo, Qiao Yi, musikana webasa, akaridza kunze kwemusuwo achiti: "Miss Ji, ndingapinde here, ndapota? Anotambidza piritsi chena kuna Jirou: "Miss Ji, changamire, regai nditumire mushonga uyu kwamuri.
Ndiwo mushonga unotonhora. Inogona kudzivirira dzihwa. Dai anga asina kufungidzira zvisirizvo, ingadai yakave nzira yekuzvidzivirira yekukurumidza. Mutende nekuda kwangu. Aifunga kuti achazvara vana vake here? Iye anogona kuvaudza zvakajeka kuti ivo vari Qin. Haadi kubatana navo kusvikira afa. Nekuti akanyepa, mukadzi waQiao aive nemhosva kwazvo: "Miss Ji, ndichakuudza zvawataura. Iye zvino unogona kutora mushonga uyu. Enda undoitora gare gare.
Paanenge achirwara, amai vake vaigadzirira huchi hwake mvura pamberi, vanyorovesa huro yake, uye voita basa rakawanda rekugadzirira. Haaimbofa akaravira kuravira kunorwadza kwemushonga. Achitarisa mapiritsi maviri ari muruoko rwake, haana kana girazi remvura rakamukomberedza. Ji Ruzhen haagoni kuvamedza. Hakusi kuti haadi kuvatora. Akakurumidza kutsanangura, "Miss Ji, ndinoreva, kana ndikasaona iwe uchinwa mushonga, netsaona wabata dzihwa, changamire vachandipa mhosva yekusakuchengeta.
Iye akati, "Qiao, unogona kundibatsira kudira girazi remvura? Miss Ji, ndokumbirawo umbomira kwekanguva. Ndiri kukudira mvura. Iye akangofunga kuendesa mushonga uye akanganwa kuti aida mvura yekumwa mushonga. Neraki, musikana mudiki aive akapusa uye haana kufunga zvakawanda.
Zvimwe, aisazoziva maitiro ekuita nemutariri Chu. Jirou akanyemwerera, "idambudziko. Zvese zvakashanduka nezuva rimwe. Nguva pfupi yapfuura, babamunini vake, Ji Chendong, aida kumutora. Akakwira mukamuri rake pakati pehusiku. Nenguva iyoyo, akapunyuka, asi haana kupunyuka nhasi. Atongerwa chokwadi Yinze, aimuona seanobatsira, asi vakamuitira zvechisimba. Rave zuva rose, uye unyoro uye kurwadziwa kwemuviri wake zvichiri kumuyeuchidza nezvehutsinye hwake uye hutsinye.
Qiaoyi akadzoka munguva pfupi, aine girazi remvura muruoko rwake, ndokuti nechido, "Miss Ji, unogona kunwa mushonga izvozvi. Mushure mekumedza mushonga, akashama muromo kuti tete Qiao vatarise: "tete Qiao, ndanwa mushonga wese, munogona kudzokera kumurume wenyu. Watanga wazorora.
Handina chokwadi kana ndikachinja pfungwa dzangu. Aiziva kuti sarudzo yakaitwa natenzi wake yakanga yakaoma kuchinja. Akataura kuti kunyangwe zvawanda sei, hazvibatsire. Munguva yekupedzisira chete, haana kanganwa kuva akavimbika. Chu Yuan akati: "Tenzi wechidiki, ndisati ndaenda, unoda here kuti nditore Miss Ji? Haudi kumuona, saka ndinovimbisa kuti handimbomurega achioneka pamberi pako zvakare.
Zvinotaridza sekuti kuviga kwake kwakaonekwa kuburikidza nashe. Zvaakaita hazvigone kuviga maziso ashe. Qin Yinze akamutarisa uye haana kutaura zvakare. Chu Yuan akanzwisisa kutarisa uku. Aiziva kuti kunyangwe tenzi aifunga kuti Ji Rou akange ashandisa nzira kwaari, zvakadaro akange asina zano rekumuregedza.
Chu Yuan akangoerekana aziva kuti anga aita zvinhu zvakawanda panjodzi yekurasikirwa nemusoro chero nguva.
Muchokwadi, zvaive zvisina basa. Haana kungokundikana kuporesa tenzi chirwere chemwoyo, asi akazviwisira iye kunyara. Uku hakusi kutaura kuti akarasikirwa nemukadzi wake nemauto. Kune ibwe rakakosha kwazvo paguva rakanyarara. Nei yakakosha? Nekuti iro dombo rakapendwa neakasiyana siyana ma pigment, rinotaridzika zuva rakanyanya, kwete sehuremu sedombo. Pamberi pebwe reguva, pane akati wandei makuru mavara - guva raXiang Lingfeng. Jirou akamira pamberi pebwe reguva. Zuva rinopisa rakamupenyera.
Ziya rake rakanga ranyorovesa mbatya dzake, asi akamira kunge aisaziva kupisa kwacho. Akamira kweinenge awa. Kwenguva yakareba, zvakange zvakareba nyika yese isati yanyarara zvekuti iye zvinyoro nyoro akatambanudza ruoko rwake ndokupuruzira mavara makuru pahwendefa rebwe, achinyora zita raakange asingazive zvekare: "mukoma Feng ……" Akadaidza zita rake, mhuno yake yainge yakashapa, misodzi ikaputika zvakare: "mukoma Feng, urikuenda kupi?
Unofanira kunge uchiri mupenyu, asi waenda kunzvimbo uko xiaorou asingakuwane. Asi ndikashungurudzwa iwe uripi? Ndakatyora izwi rangu uye hamuna kuuya kuzonditora. Mukoma Feng, unokanganwa zvechokwadi xiaorou? Ndakamirira kuti undiudze. Ndakafunga kuti handigoni kumirira. Ndaida kukuroora kubva ndiri mudiki. Nekudaro, kwete nguva refu yapfuura, apo ivo vakasangana nekutambudzika kukuru kwehupenyu, iye zvakare akanyangarika kubva kuhupenyu hwake. Zvese, zvakangoerekana zvaitika, zvakanyangarika zvizere, uye pakanga pasina nhau.
Akamutsvaga kwenguva refu, uye hapana chirevo pamusoro pake chakawanikwa. Sokunge anga asina kumbovapo. Sokunge, iye uye ndangariro yake yakapfuura, kungofungidzira kwake, zvinhu zvese hazvina kunyatsooneka.
Kunyangwe kana nezvenyaya yekufa kwako ndakaudzwa naamai vaXiang Bo, kunyangwe vakakumisira matombo, ini handitendi kuti wakandisiya. Asi zvisinei nezvakataurwa nevanhu ivavo, Ji Rou akanyatsogutsikana kuti mukoma wake Feng aisazombomusiya kuti aende kune imwe nyika.
Akangoreurura kwaari munguva pfupi, ivo vakangodanana, rudo rwechikepe chavo haruna kuvhurika, Mwari vanogona sei kumubvuta nehasha kubva padivi pake. Haana kutenda kuti akasiya nyika, asi kusava nemhosva kwakanyatso kuparadzwa nemurume anonzi Qin Yinze. Kunyangwe kana gare gare, mukoma Feng vanokwanisa kudzoka, ane sei chiso kuti vamuone? Ji Rou, uyo akachena uye akachena, haasisiri mumoyo make.
Iye zvino musikana atukwa. Mushure mezvose, imhosva yake. Kuzviziva kwake hakuna kusimba. Aigara achifunga kuti akasimba zvakakwana kuchengetedza vese vakamukomberedza. Asi pakupedzisira, akaziva kuti aive munhu asina simba aisakwanisa kana kuzvidzivirira. Ji Rou akapukuta musodzi ndokufembedza: "mukoma Feng, unondiudza, ndinofanira kuitei?
Yakanga iri shiri mumuti yakaramba ichirira. Zuva rinopisa rakarembera mumhepo. Zvinotaridza kuti zvinopisa zvekuti zvakanaka kubheka zvisikwa zvese zvepanyika. Kungoti nekuti kunze kunopisa uye inguva yegumi masikati, hakuna vanhu vazhinji mumakuva makuru. Asi kusiri kure neguva rine guva kune Jirou, kune mumwe murume, murume akanaka muhembe nhema.
Akamira kwete kure naJirou, uye maziso ake maviri akawira chinyararire pachiso chaJirou, achiona shanduko dzese dzenhema dzekutaura kwake. Vakamutarisa vachichema, vachimutarisa vachichema Maoko ake akarembera kubva parutivi rwake akachinjirwa zvibhakera, uye vakabatidzwa kakawanda, zvichiita kuti pahuma pake paite seblue.
Haana kumbofunga kuti aizotadza kuzvidzora uye kumanikidza kutora mukadzi waaisada. Wamira pano kweinopfuura awa, uye uchatomborwara kana ukamira pano zvakare.
Ndapota dzokai neni. Zvisinei, zvisinei nezvaanotaura, muteereri haana kugadzikana. Ji Rou anotarisa kumashure akamutarisa kumusoro uye pasi, kuruboshwe, kurudyi uye kurudyi. Ipapo anotarisa zvakare: "ndiwe ani? Sei uripano? Kunopisa zvikuru. Iwe unonyatsofunga kuti ndiri musungwa here? Unonditevera kunge ndiri musungwa here? Muchokwadi, murume wangu anonetsekana newe. Pengshan anotarisa kumashure kuchinzvimbo chakatemwa naQin Yinze. Iko hakuna kana ikoko zvachose.
Tenzi akabva aenda. Kana akataura chimwezve chinhu, hachizoshande. Pengshan haana kuda kutsanangura zvakanyanya. Pamwe pane chirevo chinonzi "tsananguro" kana "vhara". Aisaziva zvekutaura kana apindura, uye paive nechakakanganisika paasina kupindura, saka aifanira kuseka zvisina kufanira kwechinguva.
Ji Rou akatendeuka, ndokusimudza chiso chake ndokuchiinamatira pahwendefa rebwe. Ndichauya kuzokuona pane imwe nguva. Pabhazi rinodzokera kuguta. Ji Rou akatarisa kunze nepahwindo ndokuti, "Mr. Peng, ndokumbira utyaire kuenda kuchipatara cheguta revanhu. Ndiri kuenda kuchipatara kunoona amai vangu.
Tenzi akamukumbira kuti amutore. Haana kumukumbira kuti amuendese kuchipatara. Wapererwa nenguva yekubuda nhasi. Anongobvumirwa maawa matatu kuti abude zuva rega rega. Zvinotora maawa maviri panguva imwe chete, uye kwasara awa imwe chete yekuita mahara mabasa.
Ji Rou anobata nharembozha yake zvine simba uye anoda kufonera Qin Yinze kanoverengeka, asi pakupedzisira anoidzora. Achinzwa izwi remurume, achanzwa kurwara uye kuda kurutsa. Asi ndiani akamurega asine simba uye asinganeti, nekuda kwekukanganisa kwake, achaita kuti Ji Chendong nevamwe vatange, uye pakupedzisira vachizvipinza mumamiriro ezvinhu anonyadzisa. Nharembozha yake inoerekana yadedera. Anotarisa otambira meseji. Anotuma ndiye tenzi wake. Kana iri iyo meseji yakatumirwa natenzi, Pengshan zvakasikwa haafaniri kuregeredza, uye nekukurumidza tinya kuti uone ruzivo rweiyo ruzivo.
Chinyorwa chete chakanyora matatu mapfupi mazwi - rega aende. Musiye aende! Tenzi vakamutumira kuraira kuti aende. Pengshan akadaro, hongu, asi aisakwanisa kutora mbiri nezvayo.
Aifanira kurega Jirou azive zvairehwa natenzi. Vakanyemwerera ndokuti, "Miss Ji, sei ndisingachafonere murume wangu ndomubvunza kana achigona? Chii chaifungidzirwa naiye Qin Yinze mundangariro dzake dzechisiri chinhu chaisanzwisiswa nekufungidzirwa nevanhuwo zvavo. Pengshan akakurumidza kutora nharembozha yake ndokunyepedzera kubaya nhamba.
Akataurawo neruremekedzo pfungwa yake kuna tenzi. Pasina nguva akagura runhare: "Miss Ji, tenzi wangu munhu akanaka uye ane mutsa.
Kana tenzi wavo ari munhu ane mutsa, vamwe vangasaziva, asi ivo vakajeka nezvevanhu vanomutevera kuti vaite zvinhu. Pengshan sca legal shield kuraira kwatenzi kutumira Ji Rou kuchipatara. Iye tenzi haana kumutendera kuti amudzose, uye Pengshan haana kuzotya kutora danho, saka aifanira kumirira muchipatara. Achiona kuti Jirou abuda muward, Pengshan akamumhoresa nekuchimbidza: "Miss Ji, ngatidzokerei.
Iwe ndiwe, ndini ini, hatinei nechekuita nemumwe. Kana iwe uchida kudzokera kumashure, ndinogona kukumisa here? Kana ndikadzokera ndega, handife ndakararama. Ukasadzokera kumashure, ndinotya kuti zvichanetsa kubuda zvekare nguva inotevera.
Murume wangu haasi munhu anonakidza. Kunyangwe iwe usina hanya newe, iwe unofanirwa kufunga nezvaamai vako. Ndiri kungotaura chokwadi.
Kunyangwe iye asingazive chikonzero chaicho chakaita kuti Chu Yuan aendeswe, anoziva kuti kuenda kwaChu Yuan kunofanira kunge kune chekuita naJi rou. Tenzi wemhuri yavo anonamira kukoshesa kukuru kumukadzi uyu. Kunze kwekunge Pengshan achida kutevedza nzira yaChuyuan, haatomboshinga kutsamwisa Jirou pamberi pake.
Pengshan akanyatsojeka kuti haakwanise kugumbura mukadzi ari pamberi pake, kunyanya Mwari mukuru anodzora ramangwana rake. Mushure mekuongorora zvakanakira nezvisina kunaka, Pengshan akanzwa kuti aive nechisungo chekuudza Jirou kukosha kwenyaya, saka aiti izwi rakanzwikwa naJirou raive rekutyisidzira. Ji Rou akanyemwerera neshungu: "Mr.
Peng, wakamirirei? Haudi kudzokera here? Hongu, haakwanise hanya nehupenyu hwake uye hwerufu, asi anofanira kuve nehanya naamai vake. Iye haachagona kurwadziswa nekuda kwake. Kunyangwe aine dzimba dzekugara dzisingade kudzokera kuQin Yinze, hapana yekutanga nzira yekuti asarudze. Anofanira kudzokera shure.
Kusvikira murume wamuvenga ndokumuregedza aende! Pengshan akapinda mukati mechivanze ndokumira: "Miss Ji, ndimi muno. Ji Rou anongonzwa kuti nguva inopfuura nekukasira. Zvinoita sekunge chinhambwe pakati pekukwira nekudzika ndiyo chete nzira yekusvika pano kubva kuchipatara. Qiaoyi anga akamirira pamusuwo kwenguva yakareba. Achiona Jirou achidzoka, anonyemwerera uye Mimi anomukwazisa: "Miss Ji, unogona kudzoka.
Ndikasadzoka, ndinotya kuti makumbo ese ari maviri achakuvara. Iwe unofunga kuti handidi kudzoka here? Anogona kunyemwerera zvisingaite: "Miss Ji, ndagadzira muto wekubvisa kupisa uye detoxification. Asi ini ndanga ndatodya kudya kwemanheru, uye handichadi imwe muto.
Ane zvekukuudza ari ega. Achinzwa izvi, Ji Rou akanzwa kubvunda pamuromo wemoyo wake, uye maoko ake achitsvaira nekutya. Kunyangwe kana achida kana kwete, haazombokanganwa zvakaitika mukudzidza kwake zuva riya uye nemabatirwo aakaitwa naQin Yinze. Nguva dzaenda. Unogona kuzorora kare. Ndakadzokera kuroom kwangu, futi. Ji Rou haasi kuvenga Tete Qiao. Pane munhu mumwe chete waanovenga, murume anoparadza zvese zviroto zvake. Muregei atore danho rekuenda futi kuchidzidzo chake, ndine hurombo, anga asina hushingi, haana kumboshinga kuenda, achizeza kuenda, saka Ji Rou akadzokera kukamuri rake.
Jirou anofuratira gonhi rakavhurika, uye mune murume akamira mukamuri isingatarisirwi. Anomira padivi pehwindo, maoko akabata ruoko, otarisa panze nepahwindo. Achimuona, Ji Rou akadzokera kumashure, uye nekupenya, muviri wake wese wakaita kunge wakafukidzwa neminzwa: "chii chaunoda kuita? Mushure menguva refu, akanongedza gwaro raive padhirezi: "tarisa, kana pasina chinoramba, chisaina.
Unofunga kuti unoda kuti ndisaine chii, ndichazviita? Ji Rou akatinhira: "Qin Yinze, ibva pano! Nyika iri kure zvakadii? Ingo rovera kure! Usatambe rega ndikuone futi! Kwechinguva, akakanganwa maitiro ese. Pakarepo, akamunzwa achiti, "kekutanga kurasikirwa newe, ini handisi. Iwe unoda kusiira nguva yako yekutanga kumurume waunoda, handiti? Usafunge kuti nguva yekutanga yemukadzi inguva yekutanga. Kekutanga nguva yemurume zvakare inguva yekutanga. Akavhunduka nezvaakataura. Pasi pekushamisika nekushamisika kwaJi Rou, Qin Yinze akaenderera achiti: "Ji Rou, zvinhu zvaitika, kunyangwe tikatiza sei, zvakaitika.
Ndiri kufunga nezvenzira yekukubhadhara. Sei kubhadhara? Rudzi urwu rwechinhu ndechekuti izwi rekukumbira ruregerero uye izwi remuripo rinogona kutorwa sekunge pasina chakaitika? Iwe unogona kundipa iyo yakazara chikamu chayo - yechikadzi membrane?
Zvimwe zvinhu zvinoitika, asi hazvidzoke. Ndiri kuda kukubhadharisa muchato wangu. Anomuuraya kusava nemhosva, uye haana kodzero yekumirira murume mumoyo make, saka kuguma kwakanaka ndiko kana vaviri vacho vachienda pamwe.
Akafunga kuti Jirou aive asina chikonzero chekuramba. Kupfuura zvese, aimupa kupfuura zvaakafunga. Handina kukupa sarudzo yechipiri. Anogona kukanganwa zvaakaita kwaari, asi haazombokanganwa kuti iye mutengesi akasimba.
Iyi mhando ye scum, marara, mhuka, yakafa yakatsauka, iye anofema mweya mumwe chete naye, iye anonyangadzwa neakasviba, uye anofanira kumuroora, ane hope dzakanaka dzechirimo chake uye nguva yekutanga. Jirou haasati ambove ari munhu ane mwoyo une mwoyo kana gwayana rinogona kubayiwa.
Iye haagone zvachose kuroora chikara chinoparadza kusava nemhosva kwake uye kurota. Ukaisuwa, ucharipotsa zvachose. Usazopfugama wondikumbira mangwana. Ha ha, tenzi wechidiki Qin, ipapo unogona kumirira zvakanaka, ona kana ndikakwanisa kukubvunza. Hakusi kuti akachinja pfungwa, asi zvaakaverenga kubva mukunyemwerera kwaQin Yinze. Kwechinguva, Jirou akatadza kunzwisisa zvaaida kuita naye, asi paakafunga nezvekuti sei achizoramba ari pamba pake, akabva angonzwisisa.
Qin Yinze, mhuka, inogona kumuvhundutsira kamwe nekuchengetedza kwaamai vake. Nomuzvarirwo, pane mbiri kana katatu. Kana akabata kushaya simba kwake, anoshandisa zano iri kumudzora kakawanda. Uyu murume haana hunhu, haana hutsika mutserendende, hapana mutsara wepasi, uye akaderera kune mhuka. Asi iye ane kodzero yekuve nesimba uye kurwa naye.
Ji Rou anofunga kuti achabata matombo nemazai. Tese tinoziva kuti mhedzisiro yezai kurova ibwe chii. Iye akati, "zviitire iwe!
Usandirega ndichikuona zvakare. Uku ndiko kuripwa kukuru kwandiri. Mweya wetsvina wakazevezera, "kuravira kwako kunondinakidza. Handigoni kukurega uende. Usandibata bata ini. Iwe rega ndiende! Handina nguva yekutamba newe. Kana ndikakukumbira kuti usaine, iwe uchaisaina. Usadenhe kushivirira kwangu kasingaperi. Ji Rou akasvetuka nehasha: "Qin Yinze, ndiani amai vari kutamba zvakaoma kuti vanyengere newe? Qin Yinze akamutarisa sombrely, uye izwi rake rakadzika zvishoma: "Ji Rou, Ini Haasi murume waunokwanisa kutenga.
Jirou anotenda kuti anokwanisa chaizvo kudzora hupenyu nerufu. Pamwe chero bedzi asingateerere, sekondi inotevera, anogona kutyora mutsipa wake.
Kufunga nezve kurasikirwa kwaakaita noupenyu hwake zviri nyore, Ji Rou akadedera nekutya. Pane zvimwe zvinhu zvaunoziva iwe zvausingakwanise kuita, asi iwe unofanirwa kuzviita. Hakusi kushinga, hupenzi. Zvisinei, akabvumirana naye. Smart vanhu, zivai nzira yekufambira mberi nekudzoka, zivai kuti ndiani anogona kutsamwisa izvo vanhu vasingakwanise kutsamwisa, ziva zvekutaura pamberi pevani, uye rudzi rwechiitiko chekutamba.
Ipapo, Ji Rou akadzora zvese zvaakapinza uye akapfeka kunyemwerera kwakanaka: "Qin Shao akandidzidzisa izvo. Ini ndichaita chero chaunotaura mune ramangwana, uye handife ndakaziva chiyero chakakodzera futi. Wagutsikana here? Aida kumhanyisa kuuraya murume Kwete, kwete nekuruma. Kuruma kuchasvibisa meno ake. Anofanira kumutsika-tsika kuti afe uye netsoka dzake. Qin Yinze akadaro achifamba, "pane sutu pamubhedha wako. Ndapota uyai kuchidzidzo changu. Handinei newe. Handisi kukuona iwe mumaminitsi mashanu nenjodzi yangu.
Vakafa vakatsauka! Ndiani anoziva kuti akarova tsoka dzake patafura, uye kurwadziwa kunoita kuti asvetuke. Ah ah ah!! Akawanda sei akaipa akaita paupenyu hwake hwokupedzisira? Mwari vaizomushungurudza seizvi muhupenyu huno! Qin Yinze anomugadzirira hembe, iri shati chena. Ji Rou haanzwisise kuti sei achida kuti aipfeke. Anofanira kuupfeka kunyangwe asingade. Chiso chaJirou chakapfava, chena uye chakatsetseka, uye pinki sekunge anogona kusvina mvura kubva mumuviri wake.
Ndokusaka hembe chena yakapfava pamuviri wake inogona zvakare kuita kuti vanhu vashamisike. Ehe, kushamisika hakusi kuravira kwakashata kwaJi Rou, asi kuita kwevanhu vari muhofisi paakaonekwa muhofisi yaQin Yinze. Pamusoro peQin Yinze, kune zvekare nevarume vakati wandei vakapfeka masutu eoffice. Kana Ji Rou achioneka, maziso evarume vanoverengeka anowira paari, uyezve havagone kubva. Ivo vanomutarisa senge By nzira, Ji Rou anotaridzika seboka revarume vane nzara vava nemazuva gumi nehafu vakangoerekana vaona inonaka yakagochwa huku.
Muromo unokara zvekuti shuwa inenge yave pasi. Chokwadi, manzwiro aJirou anonzwisisika panguva ino zvinoita kunge ari huku yakagochwa yakatanhwa, yegoridhe muvara uye inonhuwirira mukunhuhwirira. Chapter Kutarisa kwavo kwakaita kuti Jirou asanyara, uye muchivande akati: "boka revakomana vane chiremera imhumhi chaiyo mune rembatya dzemakwai! Kunyanya, iye murume anotaridzika kunge munhu wenyama ishe wechidiki anokudzwa wemhuri yeQi akaita zvakaipa zvakawanda kumashure kwake.
Ndiyo yakanakisa mune tsvina! Zvinogona kunge zviri kunze kwepfungwa dzemurume. Hazvina mhosva kuti mukadzi ari pamberi pake mukadzi waanofarira kana kwete, kana amuisa zita, haatenderi vamwe kuti vamuchove. Vachinzwa izwi raQin Yinze, varume vanoverengeka vakangomuka mukurota.
Vamwe vanhu vaishandisa kukosora kuti vavhare nyadzi dzavo. Vamwe vakasundira magirazi avo pazambuko remhino uye vakatarisa magwaro mumaoko avo nenzira yekunyepedzera. Mumwe wevarume ava, aive akadzikama kupfuura vamwe, akati, "Mr. Chokwadi, basa redu rakagadzirira kutanga chero nguva. Akakwenya musoro, "Ndichakunetsa. Qin, ndokumbira utore Miss Ji kuti vagare pamwe chete. Kadhi racho rinoda pikicha yenyu mese. Mufananidzo upi weboka? Zviri zvakare panguva ino kuti iye anoona kuti Qin Marlboro points hack yachinjawo kuita shati chena uye yakachena.
Hapana akamupindura. Ji Rou akasundirwa kuchigaro naQin Yinze paakanga asingazivi. Qin Yinze akagara padivi pake zvakare. Ji Rou haafarire kuti ari padyo naye. Iye anoda kusimuka ndokuenda, asi Qin Yinze anombundikira chiuno chake zvakare.
Anodzikisa musoro wake ndokuzevezera munzeve yake: "nditeererei. Akakwenya mutsipa wake: "Qin Yinze, haudi kunditengesa. Nekuda kweizvozvo, haana kumurova, asi akamanikidza mapfupa ake kuita zvidimbu.
Ruoko rwake rwakabatwa naye. Haana kurega kuenda. Marwadzo aivepo. Jirou aida kutsiura. Asi haana kuzoshinga kupopotera, saka akabwaira ndokumukumbira kuti amunzwire tsitsi. Qin, Miss Ji, ndokumbira utarise kamera. Ivo vaviri vanhu vakanyanya kunyemwerera, uye mhedzisiro yacho ichave iri nani.
Kunyemwerera kwaive kwekunyepedzera pakutanga kuona. Ji Rou haadi kuseka, asi Qin Yinze anoisa ruoko rwake muchiuno chake ndokumunama zvakanyanya. Haagoni kubatsira kuseka. Mushure mekuseka, haakwanise kubatsira kuchema nekuseka. Pakutarisa, iye anoona kuti haadi. Qin, Miss Ji, unogona kutora mufananidzo uri nani, kana kuti tingawana mumwe? Vaviri, ndapota. Nenguva isipi makopi maviri matsvuku anonzi chitupa chemuchato akaendeswa kuna Qin Yinze naJi rou. Akadhonza bhuku kuti averenge nekuverenga, akatarisa akatarisa, uye akavimba kuti mumwe munhu achabuda achimuudza kuti iyi yaisave rezinesi rekuroora, yaive mhosho yake, yaive rezinesi rekutyaira kana chero imwe rezinesi.
Asi kwete chete kuti hakuna munhu akamupa mhinduro inogutsa, mazwi akatevera evashandi akaita kunge munhu wepamhepo amupusha. Qin, manheru ano kunyoreswa maitiro zvinoenderana nezvakapihwa neCivil Affairs Bureau. Izvi zvitupa zvemuchato zvine mvumo zviri pamutemo kubva zvino zvichienda mberi.
Ini zvakare ndinozivisa zviri pamutemo kuti vaviri vaviri zviri pamutemo murume nemukadzi kubva zvino zvichienda mberi. Fuck, ndiwe ani? Uri kuitei? Kana hasha dzake dzikakwira, mhou gumi hadzigoni kudzibata. Mai Qin, isu tiri vashandi ve minluo Civil Affairs Bureau.
Takapihwa naVaQin, takaenda kumusuwo kunyoresa muchato wevaviri. Ko Civil Affairs Bureau ichapa pane saiti saiti? Zvisinei, chero bedzi, kuti mukadzi mumagaro rwakandimbundikira bvumidzwa uye zvinogamuchirwa. Straight zvigunwe vanofanira Vaiisa mukati nyinyo, vachiita lightweight reciprocating inofamba.
Panyaya iyi muchanza ruoko rechipiri zvaanofanira zvakasimba kutsikirira pasi mudumbu, sezvo massaged pakuri mirayiridzo nepfungwa G, ichiwedzera zvishoma nezvishoma nokukurumidza, asi kwete zvichitungamirira marwadzo. Paakatanga kufonyora kana dzvinya gumbo, ipapo magadzirirwo anoshanda, uye nokukurumidza kujairika zvido uye manzwiro kuchatsiviwa ane zvepabonde. Sei vawane vakakwana ichi? Chete mhinduro imwe - kudzora mweya. Zvinofanira kuva yakadzika uye nesbivchivym, nekuti ropa makaguta pamwe okisijeni nokukurumidza, kuti nokukurumidza achauya kunakidzwa.
Zvinokosha zvakaenzana kutanga tsandanyama ari nyinyo. Izvi zvinogona kuitwa anokosha muviri kana balls vane counterweight. Uye anokosha pakusarudza sei kuzadzisa skvirta musikana - kuongorora pachangu.
Pashure pezvose, hapana munhu anogona kuita mukadzi uya, kana asingazivi zvavo erogenous pfungwa, vachava pusa uye usingagoni kumubatsira. Jet zvepabonde pasina kubatsirwa murume Vakadzi vazhinji vanodavira kuti zvepabonde - yakawanda vaaida. Hazvisi izvo! Dzimwe nguva, kuti awane zvaaida mugumisiro, unofanira kushanda nesimba, asi pakupedzisira kutsungirira vachapiwa mubayiro kuchiva mubayiro. Sezvo vakawanda vasvike skvirta zvinogona runonyengera, unofanira mupfungwa kugadzirira ichi, uye musavhunduka kana zvepabonde haisi kekutanga.
Kutange nyore postures uye vakazorora stroking kweminda kwazvo nzvimbo, zvishoma nezvishoma kutamira kurutivi pubis uye clitoris, kana mufaro uri muganhu, unogona kupinda minwe miviri pakati kupinda nepanhengo uye yakarurama kufamba kuwanira duku dhumhira chakakura bead. Kukwiza kuti G-gwapa zvinokosha panguva yakasiyana kumhanya kubva nyore uye zvishoma nezvishoma, zvishoma nezvishoma zvichiita inofamba rakapinza.
Panguva iyi, unogona Svinai zvinyoronyoro kuti pelvic tsandanyama kuwedzera kushanda. Varume vedu vane usimbe kazhinji havafungi kurara uye vanofarira kunaka kwemuviri wevakadzi, zvose zvido zvinokwanisika kubva kune iyi pose. Varume vanoda chii pabonde? Kufunga nezvekudaidzira munhu waunoda mune zvepabonde, madzimai anowanzoputira ruzivo rwakanyanya pamusoro pekuita, zvekuita zvepabonde uye mitambo yekuita nharaunda mumubhedha.
Uye zvakakodzera kudaro, munhu wose anoda zvakasiyana. Uye iwe ungangodaro usingadi chidzidzo chakadaro chakadai, sepabonde, kuva chiitiro. Nokudaro, kubva pakusarura uye kunyara, kuedza, kupa chimwe chinhu chitsva, gamuchira mazano awakaroorana naye. Zvisinei, hazvikodzeri kubvumirana, kana iwe usingadi kuita chimwe chinhu, usati, tipei imwe nzira.
Kana zvisina kudaro, munhu achafunga kuti haana hanya newe, nokuti anoda kusiyanisa zvepabonde kwete iye oga, anoda kukufadza. Ndezvipi varume vanoita zvepabonde, apo mazano avo ose anosangana nekushingaira, kana kana iwe uchida musikana kutora zvishoma? Zvichida iwe uchashamiswa, asi vamwe vanhu vanofarira kutora nhare yekuzvikudza, nekudaro, hazvibvumirwi kuramba zvishoma.
Asi yeuka, shoko guru ndiro zvishoma. Asi mubvunzo wakajeka ndewokuti, chii chinowanzoita varume vose vakaita sepabonde?
thoughts on “Zvinoda varume pabonde”
31.08.2021 at 08:42
Vokasa on Zvinoda varume pabonde
Copyright © 2021 Zvinoda varume pabonde. Powered by WordPress. Theme: Accelerate by ThemeGrill.